सक्कली प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने 'नक्कली प्रचण्ड'को चाहना
नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण ३१ शुक्रबार | Friday, August 16, 2019 १७:४३:०० मा प्रकाशित
हास्यकलाकार घनश्याम गौतम 'नक्कली प्रचण्ड'को नामले परिचित छन्। मेरी बास्सैमा 'नक्कली प्रचण्ड'को भूमिकामार्फत् दर्शकमाझ लोकप्रिय भएका गौतम विभिन्न स्टेज शोहरूमा पनि सोही भूमिकामा देखिन बढी रुचाउँछन्। गाईजात्राको अवसरमा सक्कली प्रचण्डको विषयमा समर्पण श्रीले गौतमसँग गरेको कुराकानीः
‘नक्कली प्रचण्ड’ बन्दाको पहिलो अनुभव कस्तो थियो?
मैले कहिल्यै पनि ‘प्रचण्ड’ बनेर अभिनय गर्छु भनेर सोचेकै थिइनँ। हामी नाटकमा यात्रा गर्ने क्रममा एक ठाउँमा गएको थियौं। २०६३/६४ तिर।
त्यहाँको कार्यक्रममा प्रचण्ड आउने कुरा रहेछ। तर, उनी नआउने भएछन्। त्यसपछि मैले ‘नक्कली प्रचण्ड’ बनेर अभिनय गरेँ। त्यतिबेला सबैले हौस्याए र माला लगाएर मलाई सम्मान पनि गरे। सबै मान्छे हेर्न पनि आए। त्यतिबेला मलाई म आफैं प्रचण्ड हुँ की जस्तो अनुभव भयो। त्यसपछि मैले ‘प्रचण्ड’ बनेर अभिनय गर्न थालेँ।
के तपाईंलाई कतै ‘प्रचण्ड’ भनेर मानिसहरू झुक्किएका छन्?
धेरैपटक झुक्किएका छन्। म धेरै ठाउँमा जाँदा प्रायः कलाकार नभनी प्रचण्ड आयो भनेर गाडीमा वा भेटमा साइरन बजाउँदै जाने गरेको छु। त्यो सब दर्शकहरूलाई रमाइलो पार्नका लागि।
बनेपाको एउटा महोत्सवमा जाँदा प्रचण्ड आउने भनेर गाडीमा साइरनसमेत बज्यो। प्रहरीले नै गाडीमा ढोका खोल्न गए। सबै मान्छे त्यतिबेला झुम्मिए। जब स्टेजमा गएर हँसाउन सुरु गरेपछि ‘ए कलाकार पो रहेछ’ भनेर झुक्किए।
कतिपय ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम सकिएपछि पनि मान्छेलाई कलाकार नै हो भन्ने भ्रम पर्दोरहेछ। एक ठाउँमा मैले कार्यक्रम सकिएपछि दर्शकलाई सोधेँ, ‘अघि प्रचण्ड होइन कलाकार आएको रे नि'। तर, उनीहरूले पत्याएनन्। ‘कहाँ कलाकार हुनु प्रचण्डै आएको हो नि’ भने।
तपाईलाईं तपाईंको नामले बढी चिन्छन् कि प्रचण्डको नामले?
धेरैले चाहिँ 'नक्कली प्रचण्ड'नै भनेर चिन्छन्। किनकी मेरो काम मन पराएर हो। मान्छेलाई नामले हैन कामले चिनाउने हो। कामले नाम आउने भएकाले मलाई कामले चिनायो। मलाई 'नक्कली प्रचण्ड'नै भनेर चिन्दा दुःख लाग्दैन, खुसी लाग्छ। मलाई कसैले 'घनश्याम' भनेर चिन्दैन, 'नक्कली प्रचण्ड' भनेर छिटो चिन्छन्। मेरो कलाकारिताको नाम नै यही भइसक्यो।
प्रचण्ड बनेर अहिलेसम्म कति ठाउँमा प्रस्तुति दिनुभयो?
अहिलेसम्म डेढ सयभन्दा बढी शोहरूमा प्रस्तुति दिइसकेँ।
प्रचण्डको क्यारिकेचर स्टेज वा शोमा गरिरहँदा तपाईंलाई आफू को हुँ जस्तो लाग्छ?
त्यतिबेला म आफूलाई घनश्याम ठान्दिनँ। प्रचण्डै ठान्छु। म हिँड्दा होस् वा कसैले अभिवादन गर्दाखेरि म प्रचण्ड भएरै गर्छु। मेरो 'एटिट्युड'हरू प्रचण्डकै आउँछ।
तपाईंको प्रस्तुति प्रचण्डले हेर्नुभएको छ?
हेर्नुभएको छ। उहाँकै अघि धेरैपल्ट शो गरेको छु।
हेरेपछिको उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
उहाँ हाँस्नुभएको छ। पेट मिचिमिची हाँस्नु भएको छ। मलाई तपाईंले निकै हँसाउनुभएको भन्दै मेरो अभिनयको तारिफ गर्नुएको छ।
सुरुमा भेट्दा उहाँ हाँस्दै भन्नुभयो, ‘मेरो क्यारिकेचर गर्ने तपाईं नै पो हो?’ त्यसपछि उहाँले अभिभादन गर्नुभएको छ।
तपाईंहरूको भेट अहिलेसम्म कतिपल्ट भएको छ?
३ पटकसम्म भेट भएको छ। अरु फोनबाट बेला-बेलामा कुराकानी हुन्छ। फोनमा उहाँले कलाकारको पक्षमा सधैं आफू रहेको भन्दै मलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि गर्नुभयो। भूकम्पको बेलामा उहाँले केही सहयोग पनि गर्नुभयो।
पछिल्लो भेट कहिले भयो?
अघिल्लो दसैंको एउटा चियापान कार्यक्रममा। त्यो बेलामा उहाँले मसँग खुलेर कुरा गर्नुभयो। मेरो घर बन्यो कि बनेन सोध्नुभयो। पारिवारिक कुरा गर्नुभयो।
प्रचण्ड रिसाएको थाहा छ तपाईंलाईं?
मसँग भेट्दा त त्यस्तो रिसाउनुभएको छैन। तर, उहाँ कतिपय ठाउँमा रिसाएर पत्रकारलाई गाली गरेको चाहिँ थाहा छ। सुर-सुरुमा उहाँ अलि बढी रिसाउनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले कम रिसाउनुहुन्छ।
प्रचण्डको बारेमा बाहिर कसैले कुरा काटेको सुन्नुभएको छ?
छु, सुनेको छु।
कुरा काटेको सुन्दा कस्तो लाग्छ?
नरमाइलो लाग्छ। उहाँसँग मेरो छुट्टै आत्मीयता बसिसकेको छ। उहाँले राम्रो काम गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बाहिर कार्यक्रममा जाँदा कतिपयले ‘नक्कली प्रचण्ड त राम्रो हो, तर सक्कली प्रचण्ड होइन’ भनेको सुन्छु। त्यतिबेला दुःख लाग्छ।
प्रचण्डका राम्रा बानी?
उहाँको मन कमलो छ। अरुको दुःख देख्न सक्नुहुृन्न। देशको लागि केही गरौं भन्ने उहाँको भावना छ। नेतृत्व क्षमता मनपर्छ उहाँको।
अनि सुधार्नुपर्ने बानी नि?
उहाँले नातावाद, कृपावाद गर्नुहुन्छ। त्यो नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। नसक्ने कुरा नबोलिदिए हुन्थ्यो, जे बोलेको छ त्यो पूरा गरिदिए हुन्थ्यो। एउटा अडिग सिद्धान्त लिएर हिँडिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
प्रचण्डसँग कुनै सहकार्य गर्ने त्यस्तो योजना छ?
तत्काल छैन। उहाँहरूको काममा चित्त बुझ्यो भने म गर्नसक्छु।